Qaramada Midoobay oo dalbatay $60 Milyan dollar oo loo rabo Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Nairobi – Mareeg.com: Qaramada Midoobay ayaa isniintii dalbadatay $60 Milyan dollar, taasoo ah kaalmo la doonayo in lagu baajiyo gaajo iyo masiibo banaa’aadanimo oo ka dhacda Soomaaliya.
Isuduwaha xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan bini’aadannimada Soomaaliya, Philippe Lazzarini oo isniintii shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa ka digay xaalado bini’aadannimo oo halis ah oo ku soo wajahan Soomaaliya bilaha soo socda.
Philippe Lazzarini ayaa dalbaday ilaa $60 milyan oo doolar oo deg deg ah toddobaadyada soo socda si looga hor tago xaalado halis ah oo imaan kara.
“Haddii aan kaalmo loo helin ilaa 50,000 oo carruur ah oo wajahaya nafaqo darro waxey khatar ugu jiraan geeri” ayuu Philippe Lazzarini oo warbaahinta kula hadlay Niarobi.
Isuduwaha ayaa sheegay in ay jirto xaalad qatar ah oo sababtay roobabka oo xilligooda kasoo daahay, dagaallo deegaannada qaar ka socda iyo sicirka raashinka oo kor u kacay, wuxuuna ugu baaqay dalalka deeqaha bixiya in ay gargaar deg deg ah lasoo gaaraan.
Isuduwaha xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan bini’aadannimada Philippe Lazzarini ayaa caddeeyay in sanadkan kaliya ay heleen $160 Milyan oo dollar oo ka mid ah lacagtii ay dalbadeen oo gaaraysay $133 milyan oo dollar.
Muqdisho: Guri la boobay 23 sano ka hor oo xoog lagu soo celiyey